Notsenain’ny Polisy Tao Jerosalema Tamin-kerisetra Ireo Mpanao Hetsi-panoherana “Rariny Sosialy Israeliana “ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2013 4:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Dansk, polski, English
Hetsi-panoherana iray nokarakarainà fikambanana telo samy sampana ao amin'ilay hetsika “Israeli social justice (#j14)” – Rariny Sosialy Israeliana – no niseho tao Jerosalema ny alin'ny Sabotsy teo (June 8). Nitaky ny hiverenana amin’ ilay fanapahan-kevitra hanondranana Entona natoraly avy ao Israely izay tsy ahazoana afa-tsy 12.5% amin'ny haba ihany no hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Nitsipaka ilay tetibolan'ny governemanta vaovao koa ireo mpanao hetsi-panoherana, tetibola heverina izay mikasa ny hampiakatra bebe kokoa ny hetra alaina amin'ireo sarangan'olona ambany sy salantsalany, ary mifanindran-dàlana amin'izay ny fampihenana ny vola ho an'ny foto-drafitrasa ho an'ny daholobe izay tena iankinan'ny fiainan'ireo sarangan'olona ireo. Ambony dia ambony ny tahan'ny herisetra nitsenan'ireo polisy ilay hetsika, na dia nilamina sy vitsy mpandray anjara (an-jatony kely teo ireo mpanao hetsi-panoherana) aza ilay izy.
Nandefa bitsika maro fanavaozam-baovao mikasika ilay hetsika ilay mafana fo avy amin'ny antoko ankavia Ben Marmara nanao hoe :
Midaroka vehivavy ireo polisy, tokony ho gadraina noho izany.
Marobe ny vehivavy sy lehilahy voatazon'ny polisy ao Jerosalema. #j14 Mbola mitohy ny fisamboran'ny polisy ny olona sy ny fanangonana azy ireo anaty fiaraben'ny polisy .
Toy ny natao tamin'ilay hetsika tao Ramat Gan [manohitra ny fanondranana entona], izao indray, manohy ny fandikàny lalàna sy ny fanakànana an-kerisetra hetsika iray ireo polisy . Avy eo dia misambotra ireo mpihoko.
Yishai Oltchik, ilay mafana fon'ny #j14, monina any Jerosalema, dia nampakatra ity vaovao farany ity tao amin'ny Facebook :
Afaka ny nanamarika ny fotoana voalohany nandakàn'ny polisy ahy teo amin'ny fiainako aho androany. Nitadoraka ahy, ny tena marina. Nahoana? Satria nijoro nitazona sorabavety miantso ireo Knesset [Parlemanta Israeliana] aho ny mba hanaovan'izy fakan-kevitra manokana mikasika ilay raharaha fanondranana entona …. tsy niresaka tamin'ilay polisy aho… tsy nijery azy mivantana. Tsy naka sary azy akory aza, izay zavatra ara-dalàna kanefa matetika mifarana amin'ny daroka [avy amin'ireo polisy]. Nijoro teo fotsiny aho ary dia tonga avy any izy, nanosika tamin-kerisetra ilay vehivavy niara-nitazona tamiko ilay sorabavety (nampitrosona azy tamin'ny lamosiny), no sady nandaka ahy…. Nolazaiko tamin'ilay manampahefan'ny polisy tsy lavitra teo fa nodakanà polisy tsy amin'antony akory aho; nihomehezany fotsiny aho ary dia notohizany ihany ny diany.
Ny zavatra tena mahatezitra ahy mafy dia ny nahalalako fa hay tsy zava-baovao amin'izy ireo intsony ny tahaka izany. Anjarako fotsiny izany tamin'iny andro iny, ary mbola nanam-bitana aza aho izany fa daka iray ihany dia noheverin'ilay polisy fa ampy ahy — satria matetika tsy mijanona amin'ny daka iray izy ireo. Tsy latsaky ny 10 ny olona efa hitako voatosika sy voadakan'ny polisy, ary iray na roa no fisamborana tamin-kerisetra.
Orly Bar-Lev, ilay mafana fon'ny #14 monina any Tel Aviv-based dia nampakatra ity sary manaraka ity tao amin'ny Facebook ary nanoratra hoe :
Ankavanana mankao an-kavia : “Bibi [solonanaran'i Netanyahu] – Atsaharo ny fampihorohoroana ara-toekarena!
Orly eo afovoany : “Fanondranana entona = famonoan-tenan'ny fanjakana” ary “Tsia ho an'ny fampihenana ny volan-jaza” [iray amin'ireo fepetram-pitsitsiana kasaina ho raisina izay tena hahavoa mafy ireo sarangan'olona ambany]
Notsenain'ireo polisy tamin-kerisetra sy hery tsy mifandanja ireo olon-tsotra an'arivony nanara-dalàna sy nilamina nanao hetsika hanoherany ireo fepetram-pitsitsiana kasaina ho raisina, raharaha ara-toekarena ary ny fanondranana entona. Polisy mitaingin-tsoavaly??? Midaroka vehivavy??? Mpanao hetsi-panoherana iray nitsahanà polisy tamin'ny moto??? Fa inona no olanareo e?
Iza no nanome alàlana anareo hampiato an-terisetra ilay hetsika sy hanitsakitsaka ny zo hanao fihetsiketsehana? Iza no nanome baiko anareo hampiato famoroam-bahoaka amin'ny fomba demaokratika hiazo ny tranon'ny Praiministra? Iza no tomponandraikitra amin'izany hadalàna izany?
Namerina nampakatra ilay vaovao farany nalefan'i Orly i Andrea Radu ary nanampy hoe :
Ny hany mba demokrasia aty Afovoany Atsinanana, itsahana ireo mpihoko, darohana ary samborina satria niezaka hampiasa ny zony ara-demokratika mba hanao hetsi-panoherana.
Polisy mitaingina soavaly mihodidina ireo mpihokon'ny #j14 nanoloana ny trano fonenan'Ingahy Praiministra tao Jerosalema
Sary : Gali Fialkow mafana fon'ny #j14
Tsy dia nahoraka tamin'ny filazam-baovao loatra iny hetsika iny sy ny herisetra nataon'ireo polisy ary filazam-baovao maro sy mafana fo maro no nitaraina ny amin'ny fanaovana tatitra vilana. Naminag izay nandray anjara tamin'ilay hetsika dia nandefa bitsika toy izao :
Ynet [vohikalam-baovao Israeliana lehibe iray, izay an'i Yedhioth Aharonot, mifandray akaiky amin'i Yair Lapid, Minisitry ny Vola ] dia milaza fa “nampiasa hery ara-drariny” ireo polisy. Marina ve ? satria mantsy nahita mpihoko natosika avy eny amin'ny tohatra nikodiadia hatraty ambany aho, nahita polisy nanitsaka mpihoko iray tamin'ny moto ary polisy iray nanao aro-loha nanome “coup de tete” mpihoko iray. Ary izany rehetra izany aza raha mbola vao namindra teo amin'ny 100 metatra teo monja izahay .
Tao amin'ny Facebook, Barak Cohen, ilay antsoin'ny maro hoe “mpisolovavan'ny #j14 “, dia nizara ity lahatsary ity izay mampiseho polisy mitaritarika mpanao hetsi-panoherana iray :
Nizara lahatsary iray hafa tao amin'ny YouTube ihany koa izy izay mampiseho polisy iray nisambotra azy noho izy nijoro teo amin'ny sisin-dàlana :